Mpampivelona Ary Zinekôlôgy Job Description / Duty Template sy Zavatra Ataony - JobDescriptionSample.org
Home / Uncategorized / Mpampivelona Ary Zinekôlôgy Job Description / Duty Template sy Zavatra Ataony
Jacob Jona 28, 2016 Uncategorized Leave a comment 1,803 Views
Dokotera izay manome vola fikarakarana ara-pahasalamana, na asa mifandray amin'ny fiterahana sy ireo izay mamantatra, hiatrika, ary manampy amin'ny fisorohana fepetra ny vehivavy, indrindra fa ireo fiantraikany ny fandikana dingana. Mety ihany koa ny manome fikarakarana ara-pahasalamana amin'ny ankapobeny ny vehivavy.
Mikarakara ny vehivavy sy ny adiresy.
Teknika ary iaraho midinika hita tamin'ny fandinihana natao na nomena fitsaboana mampiasa mpanjifa.
Manoloana ny aretina ny X-SAMPA taova.
Manara-maso sy ny fanatsarana peopleA aretina sy handinika indray vahaolana raha ilaina.
Fanampiny na hanatanteraka ny fandidiana toy ny faritra cesarean ilaina mba hanohana peopleWI fahasalamana sy mamokatra zaza tsy manana ahiahy.
Fanafody na omeo vahaolana, fanafody, ary koa ny fitsaboana manokana izay hafa ny hitondra na hampihena ny toe-javatra, aretina, na ny ratsy.
Diniho jereo-up vaovao, tantara, jereo soa, na ny antontan-taratasy mba handinika toe-marary.
Angony, rakitra, ka tandremo foana angon-drakitra manokana, toy ny mpitsabo tantara, tantara, ary ny fanadinana vokatra.
Hitari-dalana ny marary sy ny fiaraha-monina ny olona momba ny fisorohana ny aretina, sy asa atao, fahadiovana.
Mitantara marary ny manam-pahaizana manokana izay fitsaboana hafa, na manam-pahaizana, rehefa ilaina.
Jereo miaraka na manome amin'ny dokotera fanampiny nitsidika vahaolana.
Asa avy hatrany sy mandrindra ny mpanao , mpianatra, mpanampy, matihanina, mpitsabo mpanampy, miaraka amin'ireo fitsaboana hafa manokana.
Strategy, mampihatra, na hanatanteraka ny fahasalamana fangatahana amin'ny orinasa, na ny mpifanolo-bodirindrina momba ny fitsaboana sy ny fisorohana ny loza na ny aretina.
Omano tsara governemanta sy ny tatitra momba ny staff fijoroana vavolombelona, fanaterana, maty, sy ny aretina by MediaWiki, na angamba ny ara-pitsaboana laza ny olona iray.
Manao fianarana mba hamokatra na hanamarina fitsaboana, zava-mahadomelina, na teknika mba hisorohana na aretina na ny ratra hifehy.
Fahazoanao ny hevitr'izay vakinao-fahazoana ny fehintsoratra, ary afa-po amin'ny asa namorona ny taratasy izay mifandraika.
Fahaiza-mihaino-manome fanentanana manontolo ny zavatra hafa dia nanao hoe:, fahazoana fotoana sy hery mba hamantatra ny zavatra namoronana, nanontany fanontaniana toy ny mety, ary amin'ny toe-javatra tsy manapa-dratsy izay.
Namokatra-taratasy On tsy mba toy ny tsy mety ny fepetra takiana amin'ny tsena niresaka mahomby.
Fifandraisana Miteny amin'ny hafa mba hizara angona effortlessly.
Matematika-Mampiasa maths mba handaminana zava-manahirana.
Mampiasa teknolojia-vahaolana ny siansa sy ny fitsipika mba hamahana olana.
Mihevitra fa zava-dehibe-dia niady hevitra sy ny antony Mampiasa ny mamantatra lesoka sy ny hery ny safidy safidy, hevitra na fomba olana.
Active fahafantarana ny Fianarana-baovao vaovao momba ny fiantraikany na mety manatrika sy famahana olana-sy ny fandraisana fanapahan-kevitra.
Mianatra Fomba-ny fifidianana sy ny mampiasa fomba fijery sy ny fomba fiasa educationANDtutorial mendrika ny toe-javatra manokana, rehefa mianatra na mampianatra olana izay vaovao.
Fanaraha-maso-maso / mamaritra-miasa ny olona fanampiny, ny tenanao, na orinasa mba ho fivoarana na handray remedial asa.
Social fidirana-Ny hoe mahalala ny hafa’ fironana ny antony mamaly araka ny ataony sy ny fahalalana.
Fandrindrana-Manitsy hetsika raha oharina amin'ny olon-kafa’ fitondran-tena.
Salesmanship-Mandresy lahatra ny hafa mba hanova ny fahazarana, na ny lohany.
Fanelanelanana-Manome ny hafa miaraka sy mitady ny hampihavana variances.
Fampiofanana ny hafa nanampy-HOWTO manao hetsika.
Service Orientation-mavitrika mitady paikady mba hanampiana ry namana.
Advanced Problemsolving-Famantarana ny olana sarotra sy ny fikarohana zava-misy mifandray handinika sy hanorina ny safidy sy mampihatra safidy.
Asa fikarohana-Fandalinana entam-barotra sy ny zavatra takiana alohan'ny mitaky ny ho lasa fomba.
Technology Building Design-na ny fampifanarahana fitaovana sy ny teknolojia mba hanampiana olona takiana.
Fitaovana Selection-manapa-kevitra ny fitaovana sy ny fitaovana ilaina ny karazana zava-dehibe mba hamono ny asa.
Andian-fametrahana modely, fitaovana, tariby, na ny fonosana hanatanteraka specs.
Development-Publishing solosaina fandaharan'asa momba ny tanjona izay maro.
Operation Tracking-fandinihana fanadinana, kiboriny, na samy hafa mba hahazoana antoka famantarana misy milina manao araka ny tokony ho.
Asa sy ny tahony-Mpitantana asa ny rafitra na ny entana.
Maintenance-manao fikojakojana izay fahazarana eo amin'ny fitaovana sy ny manapa-kevitra raha ary inona no karazana fikojakojana ho ilaina.
Fanamboarana-mamaritra izany ao ambadiky Fahadisoana Kely no miasa sy misafidy izay lalana handeha momba izany.
Manamboatra-namboatra fandaharan'asa na entana mampiasa ny fitaovana izay irina.
Quality-Control Rehefa nandinika-manao fanaovana fitiliana sy ny fanombanana ny vokatra, mpamatsy, na ny fomba fiasa mba hitsara tsara na miasa.
View sy ny fandraisana fanapahan-kevitra-nieritreritra mikasika ny tombontsoa sy ny vidin'ny ankapobeny ny dingana izay mety hisafidy ny tsara indrindra iray.
Analysis-Inona no Atao hoe inona no karazana rafitra dia tokony miasa sy ny fomba fanatsarana ny asa, toe-javatra, miaraka amin'ny tontolo iainana dia mety hisy fiantraikany soa.
Systems Evaluation-mamaritra dingana na hita ny fampisehoana sy ny rafitra mikasika ny tanjona ny fitaovana, marina na ny fitondran-tena ilaina mba hanatsarana fampisehoana.
Time-Management-manazava ny hafa’ fotoana ary koa oneis fotoana manokana.
Fitantanana ara-bola Resources-manapa-kevitra ny fomba vola ho ela dia ampiasaina mba manao ny asa vita, sy ny varotra ho an'ny ireo volavolan-dalàna.
Administration de Fitaovana Resources-Getting sy mitandrina ny mety fampiasana ny vokatra, orinasa, ary nanana singa ilaina ny manao asa sasany.
Fanaraha-maso ny Staff Resources-Fanorenana, mandrisika, ary mitarika olona raha manao, manavaka ny tsara indrindra ho an'ny olona ny asa.
Training fahaizana Knowledge Fepetra
Mihoatra ny 4 taona, hatramin'ny 6 taona ary ao anatin'izany ny,
Fahaiza-mitarika Career fepetra takiana mialohan'ny ahafahana
Zava-bita / andrana – 96.18%
tapa-kevitra – 94.79%
tetikasa – 90.85%
Fiaraha-miasa – 95.73%
Matter ny hafa – 96.80%
toerany ara-tsosialy – 87.01%
Fahafehezan-tena – 96.39%
Pressure tokonam-baravarana – 97.20%
tapaka – 99.20%
Fanentanana ny Detail – 99.20%
Fitsipi-pitondran- – %
mandroso – 87.36%
mieritreritra – 91.53%